Dib u eegida iPad Mini 2: Fikradda ugu horeysa ee Apple Five-Star
Dib u eegista alaabta Kombiyuutarada iyo Maqalka
IPad Mini 2 Jinsiyadihii Hore ee Mini Mini iyo Rivals iPad Air
Waxaa laga yaabaa inuu u ekaado iPad Mini, laakiin 7.9-inch iPad Mini oo leh Retina Display uma dhaqmaan sida mid. Xaqiiqdii ma soo saari doonto waayo-aragnimo yaryar.
IPad-ka asalka ah wuxuu lahaa sifooyin isku mid ah sida iPad 4 , oo ay ka mid yihiin 4G LTE, 5 MP MP4 iSight iyo muuqaal u gaar ah Siri . Hase yeeshee, waxaa loo adeegsadey isla processor-yada iPad 2, kaas oo ku saabsan sida mashiinka Honda Civic's ee ku yaala Corvette. Waxay u muuqatay mid qurux badan, wayna heli kartaa shaqada la qabtay, laakiin ma aheyn mid si toos ah u fogeynaya cid kasta oo wadada weyn.
Taas bedelay sannadkii 2013 ee iPad Mini. Haddii ugu dhawaan la sii daayo iPad Air waa Apple's cusub ee Corvette, iPad Mini oo leh Retina Display waa Porsche oo Apple ah.
Heerka isku midka ah 64-bit A7 System-on-a-Chip oo awood u leh iPad Air iyo iPhone 5S.
Sawirro muuqaal ah oo muujinaya sawirada 326 pixels-per-inch (PPI).
Taageerada Wi-Fi-ga ee Multiple-In-Multiple-Out (MIMO).
IPad Air iyo iPad Mini 2
iPad Mini 2 Dib u Fiirinta Dhameystiran
IPad Mini 2 ayaa wajahaya tartan xooggan oo ku yaal suuqa suuqa. Marka Mini-kani la sii daayay, kiniinada 7-inch ayaa lagu waraabiyey noocyada tartanka 10-inch. Labada nooc ee Amazon Kindle Fire HDX iyo Google Nexus 7 ayaa xiray farqiga ku jira kaniiniyada 10-inch, iyada oo bixinaysa sawirada Retina Display iyo qalabka afar geesoodka leh oo samaynta cabbirka farqiga u dhexeeya halkii ay ka muuqan lahaayeen waxqabadka.
Laakiin inkastoo guulaha ay sameeyeen Amazon iyo Google, iPad Mini 2 ayaa weli soo baxaya sida Porsche ee suuqa. Ha u oggolaan in kuwan shaqsiyaadka afar geesoodka ah ay kugu nacayaan. The iPad Mini 2's 64-bit dual-core A7 ayaa si weyn uga soo horjeeda Nexus 7 iyadoo la adeegsanayo qaabka GeekBench 3, halka halka GeekBench 3 uusan ku socon aaladda Kindle Fire HDX , A7 oo ka baxsan qalabka kale ee Android-ka isticmaalaya 2.2 GHz Qualcomm Snapdragon 800 processor.
Si kale haddii loo dhigo, Mini Mini waa mid dhakhso ah. Iftiin dhakhso ah. Si aad u dhaqsaha badan oo ka mid ah Mini-Mini, oo isticmaalay iPad 2 ee processor A5, in ay fududahay in loo sheego farqiga haddii aad internetka ku eegayso, boggaga sida ugu dhaqsiyaha badan u soo baxa, ama ciyaarista GT Racing 2, oo labadoodaba kor loo qaado oo wuxuu ku dhex jiraa jinsiyada ku dhowaad saddex jeer isla marka la eego sannadkii hore ee iPad Mini. 64-bit Chip-ka iPad Mini 2 ayaa saacad yar ka hooseysa iPad Air oo cusub oo la sii daayay, isla markaana la siman 1.28 GHz of iPhone 5S marka la barbar dhigo 1.4 GHz of iPad Air, laakiin 2048x1536 Retina Display xirmo in pixels dheeraad ah (PPI) oo ah 7.9 inji, oo leh 326 PPI on Mini cusub marka la barbar dhigo 264 PPI on Air.
Dhab ahaan, farqiga u dhexeeya iPad Mini 2 iyo iPad Air waa cabirka kiniinka iyo qaniinyada ay ka qaataan jeebkaaga. Farogelinta waxqabadka waa mid aad u yar waxayna qaadataa barnaamij kombuyuutar ah si ay u sheegto farqiga, iyo inaad ogaato farqiga u dhexeeya bandhigyada, waxaad u baahan doontaa inaad kiniiniyada ku qabato indhaheeda. Qiyaasta cabbirka weyn ee iPad Air waxay u sahlaysaa in ay u adeegsato waxsoosaar, laakiin iPad Mini 2 ayaa bixisa dhaqdhaqaaqa badan.
Sababtoo ah kordhinta Retina Display, iPad Mini 2 waa 3 milimitir dhererka miisaanka iyo miisaanka .04 rodol ka badan kii asalka ahaa. Haddii aad u maleyneyso in farqiga u yar yahay si loo ogaado, waxaad si buuxda u saxdaa. Iyaga oo waji horay iyo dhinaca dhinac ah, waxaad u sheegi kartaa farqigaaga adigoo ku soo celinaya oo runtii isticmaalaya. IPad Mini-ka cusub ayaa ugu horeysa $ 399 oo ah 16 GB Wi-Fi, marka la barbar dhigo qiimaha rasmiga ah ee $ 329, laakiin tixgelinta waxa aad u heshid $ 70 dheeraad ah, waa gorgortan. Tani ma aha waayo-aragnimo la daadiyey. Tani waa iPad, oo u dhiganta walaalkiis ka weyn, iyo qaybo ka mid ah, xitaa ka sii fiican.
Tilmaamaha Qaadashada ee iPad-ka
Apple & # 39; ama (Qofkasta '&' s) Tababarka ugu horeeya 5-Star
Waxay u egtahay inay adag tahay in la siiyo iPad Mini 2 shan xiddigood oo buuxa ka dib markii aan siiyey iPad Air kaliya 4.5, laakiin dhab ahaantii way fududayd. Had iyo jeer waxaa jiray kiniin shan shakhsi ah, waa iPad Mini 2. Waxay ku xanuunsan tahay isla halis aan caadi aheyn sida iPad Air - waxoogaa buggy ah (for Apple) nidaamka hawlgalka ee iOS 7 - laakiin cilladdaasi waxay sii wanaagsanaaneysaa waqti ka dib sida Apple sii daayo updates, iyo ugu dambeyntii, iOS 7 bandhigayaa muuqaalada ka badan kasta oo version OS ah.
Inkastoo aan isku dayayo in aan dib u eego kiniin kasta oo ka mid ah mudnaanta u gaarka ah halkii aan isbarbardhigeynin horey u ahaanshihiisa, way adagtahay in la iska indha-tiro baaxada weyn ee iPad Mini 2 oo lagu sameeyey iPadka Mini. Mini-Mini ayaa labanlaabaya xalka, taas oo loola jeedo afar jeer pixel, oo afar jeer ka dhaqso asalka asalka ah ee shaxanka ah oo ku dhowaad siddeed jeer sida ugu dhakhsaha badan. Tani waxay sameeyneysaa iyada oo la ilaalinayo nolosha halbeegga isla markaana qiyaasta miisaanka iyo miisaanka isku midka ah.
Farsamooyin farsamo oo dhinac ah, laga yaabo in farqiga ugu wayn ee u dhaxeeya Minika cusub iyo tartanka waa in tartanka uu u adeegi karo ujeedadiisa, Mini-yada cusub ayaa ka codsanaya in la isticmaalo. Waxaad abuuri doontaa sababo aad u isticmaali karto. Markaad dhameysid bogga internetka ee aad jeceshahay, waxaad u baahan doontaa inaad sii joogto internetka oo aragto wax badan. Waxaad ka careysiineysaa in saaxiibbadaa aysan cusboonaysiin Facebook ka badan, oo ku siinaya marmarsiyo badan si aad u soo qaadato. Si sahlan u haysashada hal gacan, oo kugu filan in aad si xad dhaaf ah u ogaato inuu jiro, iyo mid ka mid ah kiniinnada ugu dhakhsaha badan ee meeraha, waxaad dareemeysaa inaad si siman ugu raaxeysaneyso adigoo ku dul fadhiya fadhigaaga ama canshuurta A7 processor miiskaaga.
Tani waa kiniin 5-gaaban.
IBUYPOWER Tababarka 101 W230SD
Lenovo H30-50 Dib-u-eegista Muuqaalka PC
Dib-u-qiimeynta "Accelerior S Review"
Tripp Lite SMART1500LCD Dib u eegis
Dell Studio XPS 9100 PC Desktop Tababar
Epson PowerLite 1980WU Qorshaha Mashruuca
Maxaa Ka Dhigaya Hab Dhaqameedka Leh?
6 Kaararka Ciwaanka ee TV-ga iyo Kaararka Caawinta Ciyaaraha si loogu iibsado 2018
Sidee loo xiri karaa Desktop ee Windows 8.1
Sida loo doorto Xog sugan iyo Hack-Proof, Email Password adag
Waa maxay mawqifka MP4?
Helitaanka Windows 7 iyo Mac OS X si ay u wada ciyaaraan
Waxyaabaha aad sameyn kartid Wolfram Alpha
Sida loo Sameeyo Saxeexaaga Hotmail ee Outlook.com
Sida loo Isticmaalayo Mac OS X Adeegsadaha Raadinta si aad u hesho Boostada
Apple AirPlay iyo MirPoring Mirroring lagu sharaxay
Beddelista Firefox's File Download Settings Via About: config
Iska ilaali inaad sameyso darajada 5aad ee isku dhejinta khaladaadka
Khadka Taleefanka Istaraatiijiyada Linux ee Versus Interspaces
Sidee loo soo celiyaa IncrediMail Email iyo Macluumaad Kale oo ka soo Baxda
Sida loo Maamulo Plug-ins ee Safari Web Browser
Sidee loo joojiyaa iTunes si toos ah u siinta iPhone
Sida loo sameeyo Apple Genius Bar Ballanta Taageerada Tech
Sida Loo Beddelo Noocyada Kartida ee Google Chrome
Dib u eegista Muusikada Muusikada: Maqal Free and Legal Music